SIDA LOO ABUURO ISBINAAJKA DHULKA BANAAN OO LEH ABUUR IYO GEEDO: MARKA AY SAX TAHAY IN LA BEERO - GUGA AMA MAAHA, WAA LAGAMA MAARMAAN TAHAY IN LA QOOYO, SIDA LOO DOORTO NOOCYADA UGU FIICAN EE GOOBTA LOOGU TALAGALAY? - BEER CAGAARAN
Talooyin faahfaahsan oo ku saabsan beeritaanka isbinaajka dhulka dhulka u furan leh abuur iyo geedo
Qof kastaa wuu ogyahay faa'iidada isbinaajiga, ha diidin xaqiiqdaas. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo tani, isagu ma aha booqde joogta ah ee sariiraha beerta casri ah. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in dad badani aysan garanaynin xeerarka koritaanka iyo daryeesha isbinaajka gudaha bannaanka u furan.
Iyo jaahilnimadu waxay aaminsan tahay in tani ay tahay habka waqti-qaadashada ah. Maqaalkani waxaad ku baran doontaa wax walba oo ku saabsan sida loo abuuro abuurka isbinaajiga ee dalka ama beerta, haddii aad u baahan tahay inaad horey u qoyso, iyo sidoo kale arag sida dalagga u ekaanayo sawirka.
Goorta la beero: guga, xagaaga iyo dayrta
Guga, sababtoo ah socodka hore ee midabka iyo ujeedka socodsiinta soonaha, noocyada hore ee bislaada sida Godri, Virofle, Giant, Spokane ayaa lagu beeray.
Caawimaad! Sidoo kale beeritaanka guga ee bisha Maarso, dabayaaqadii-Bisaylkiisa kala duwan Victoria waxay noqon doontaa mid ku haboon, tan iyo astaamaha kala duwanaanshahan ayaa si tartiib ah u kobcaya.
Wixii beerto ee xagaaga, dhammaadka May - bilowga June, meesha ugu wanaagsan ee isweydaarsiga Stoik ama Sturgeon. Waa xagaaga, noocyada noocan oo kale ah waxay bixiyaan wax-soosaarkooda sare.
Wixii beeritaanka dayrta goor dambe ee bisha Nofembar, noocyo ku haboon sida Jirolistny, Korenta, Blyumselsky Sababtoo ah inay iska caabbiyaan tsvetushnosti.
Waxaa haboon in la ogaado qaabka kala duwan ee matador kala duwan, kaas oo la beeray laga bilaabo guga horraanta bisha Maarso ilaa dayrta goor dambe bisha November. Waxay u adkaysantaa heerkulka hooseeya waxayna leedahay waqti yar oo yar yar.
Waxa kale oo jira noocyo in la koray oo keliya geedo ama abuur.
Marka koritaanka geedo ay isticmaalaan noocyo kala duwan oo ah fayruska New Zealand ama Matador. Seeds for geedo lagu beeray March ama horraantii Abriil.
Wixii abuurka sii kordhaya oo isticmaalaya noocyo of Victoria, Giant, Matador iyo Berry. Waa kuwa ugu caansan. Noocyada noocan oo kale ah waxaa lagu abuuri karaa sanadka oo dhan wareega aqalka dhirta lagu koriyo. Goobta furan, noocyada noocan ah waxaa lagu beeray laga bilaabo Maarso ilaa Juun. Xilliga dayrta ee xilliga dayrta - badhtamaha bisha Agoosto, xilliga jiilaalka - lagu beeray bisha Sebtembar ama Oktoobar.
Halka ay ka fiican tahay inaad sameyso: gudaha hooska ama qorraxda
Wixii isbeddelaya sii kordhaya ayaa si fiican ugu habboon aagga iftiin leh oo aan lahayn biyo-xireen. Taasi waa, waa in lagu dhejiyaa heer sare ah. Muuqaalka gaarka ah ee isbinaajka waa dulqaadka hooska. Waxaa si badbaado leh loogu beeri karaa meel hoosaad ama meel iftiin leh.
Taarbo caleemo ayaa awood u yeelan doonta, laakiin waxay ku jirtaa hindisada mana jiri doonto qadhaadh. Si aad u dalbato dalagyada sida ugu dhakhsaha badan, isbinaajka beerka ku yaal koonfurta koonfureed.in laga ilaaliyo dabaysha qabow. Haddii aagga oo dhan uu ku yaalo dooxada hoose, ka dibna beeritaanka waxaa lagu sameeyaa sariiraha, dushooda.
Muuqaal khaas ah oo isbinaajid ah waa mid la mid ah dadka badankooda beerta. Sidaa darteed, looma baahna in laga fekero kuwa horay u sii kordhaya ee ku yaala goobta. Laakiin waxa aad u baahan tahay inaad taxaddar u yeelatid waa tirada naas-nuujinta. Dharka ugu sareeya ee loo sameeyay dhirta hore, ayaa ugu fiican ee isbinaajka. Goobtu waxay ku haboontahay dhaqameed kasta oo dhir ah, marka laga reebo xididdo.
Sida loo diyaariyo ciidda?
Ugu fiican ee isbinaajka ku habboon ciidda nafaqada dabacsan. Taasi waa, loamy ama carrada ciid leh oo leh acidity hooseeyo. Ma abuuri kartid warshad ku taal ciidda qalalan. Halkaas oo kale, koritaankeedu wuu sii yaraanayaa. Si loo hagaajiyo dhismaha ciidda, waxaa lagama maarmaan ah in horay loo soo geliyo digada qudhuntay.
Haddii ciidadu ay buuxiso dhammaan shuruudaha lagu beero, tallaabooyinka soo socda waa in la qaado.:
Xilliga dayrta si ay u sameeyaan bacriminta fosfate-potassium ciid.
Ku dar qiyaasta kala duwan ee bacriminta nitrogen, iyo qeybtii labaad - guga.
Haddii ciidda ay aad u liidato, ka dibna ka hor beerashada 1 m2 samee 5 g of fosfooraska, 7-9 g of nitrogen iyo 10-12 g of potassium.
Noocyada sii kordhaya ee goobta
Marka la eego goosashada, noocyada kala duwan ee isbinaajka ayaa loo qaybiyaa: hore, bartamihii dhexe iyo xilliyo goos goos ah. Noocyada ugu wanaagsan ee hore u bislaaday beeritaanka dhul furan:
Noocyada xilliga-dhexe ee dhul furan:
Noocyada dabacsan ee-dhaqso loogu beerayo beerta furan:
Kadib waxaad arki doontaa sida dhaqankaan u ekaanayo sawirka:
Sida loo doorto oo loo hirgeliyo abuurka, waa lagama maarmaan tahay in la rusheeyo?
Ka hor inta aadan beerin, waxaad u baahan tahay inaad doorato abuurka tayo sare leh oo aad u diyaariso. Xulashada miraha waxaa lagu sameeyaa gacanta. Dooro abuurka taas oo aan jirin wax cilado ah. Marka xigta, waxay u baahan yihiin in lagu rusheeyo biyo diirran. Dalagyada isbinaajka ah waxay leeyihiin qolof aad u adag, sidaas darteed waxay u baahan yihiin inay qoyaan 24-48 saacadood.
Seeds waxay diyaar u noqon doontaa beerto marka jirkani uu biyo raacsan yahay. Waxaad u baahan tahay inaad ku riddo weelka dhalada meel diirran oo marmarna baddasha biyaha. Ka dib markii miraha la jilciyey, waxay ka soo baxaan biyaha, wax yar la qalajiyey.
Marka xigta, samee jeermisyo xal manganese ah. Ku qooji miraha la soo xulay ee 1% manganese 20 daqiiqo. Ka dib markii biyo lagu dhaqo oo si toos ah ugu soco dhulka.
Sidee u abuurtaa?
Wixii beer abuur ah ee dhulka ku furan, samee waxqabadyadaas:
Xakee ciidda oo u heer.
Markaad sariirta dillaacdo, sameyso tuulo oo aad ku ilaaliso kuraasta.
Samee safo sariirta beerta, ilaalinta masaafada 15-20 cm inta u dhaxeysa.
Masaafada u dhaxeysa dhirta waa inay ahaataa 7 ilaa 10 cm.
1 m2 isticmaal 4-5 garaam oo miraha.
Ha ku beerin dhirta si weyn, tani waxay sii yaraanaysaa koritaankooda.
Qodobada sariiraha ku dul shub biyo diirran.
U faafi miraha galka.
Dabool daboolka ciidda.
Si khafiif ah u jilciya ciidda.
Si loo yareeyo uumiga qoyaanka iyo hoos u googooyso muuqaalka haramaha, waxaad u baahan tahay inaad mulcho ciidda leh hay, caleemo qalalan ama caws.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad daawato fiidiyo ku saabsan sida loo abuuro abuurka isbinaajka:
Ma u baahan tahay in aad dib u abuurto ka dib wakhti ama goosashada ka dib?
Si aad u hesho dalag xilliga xagaaga ama wakhti dheer oo dheer, miraha waxaa lagu beeray karaa muddo ka dib. Soo saare abuurkan ka dib goosashada.
Nidaamkani wuxuu ka bilaabmaa koritaanka geedo naftooda. Waxaa lagu koray weel gaar ah ilaa caleemaha ugu horeysa ee muuqda. Next, diyaariso geedo for beerto iyo u diraan si ay u furaan dhulka. Marka loo diyaariyo geedo for beerto waa in ay aad u taxaddar, tan iyo markii Isbaantu waxay leedahay nidaam xidid aad u daciif ah.
Kadibna sii wad geedi socodka beeraha. In grooves ee sariiraha on goobta dhibic geedo, daboolay dhulka, is dulfuulan iyo waraabiyo biyo diiran.
Daryeelka marka hore
Daaweynta isbuunisku waa mid sahlan. Waxay ka kooban tahay khafiifinta, waraabinta habboon iyo nafaqada dhirta.
Nidaamka koowaad waa in la sameeyaa ka dib marka muuqaalka buug-yaraha labaad ee runta ah. Xiga marka ay adag tahay, khafiifinta ayaa la sameeyaa si dhirta loo helo qadarka loo baahan yahay ee oksijiinta.
Waa muhiim! Xayawaanku waa inay koraan fogaan ah 10-15 sms kasta oo kale.
Waa inay noqotaa mid joogto ah. Saddex litir oo dareere ah ayaa loo baahan yahay halkii mitir. Waraabahan waa in la sameeyaa 2-3 jeer toddobaadkii. Marka cimilada qoyan iyo kulul ay ku qaataan waraabin badan.
Haddii dhirtu muujiso koritaan liita, ka dibna Bacriminta nitrogen waa in lagu dabaqaa inta lagu jiro waraabka. Bacriminta ama Bacriminta Fosfatiga looma isticmaali karo dharka ugu sarreeya.
Dhirta noocee ah ayaa ugu haboon?
Spinach wuxuu awood u leeyahay in uu xidid la qaato dhir kasta, laakiin ugu fiican barandhada, yaanyada, digirta, radishes iyo kohlrabi.
Maxaa loo abuuraa ka hor iyo ka dib?
Pretsors spinach waxay noqon kartaa baradhada, qajaarka, yaanyada, basbaaska, iyo zucchini. Si looga fogaado quudinta ciidda, isbinaajka ayaa lagu koray hal meel ka dib fasax 3-4 sano ah. Ka dib markii isbinaajka, ee ciidda intiisa kale, waxaad ku beeri kartaa Jerusalem artichoke, rutabaga, dabocase ama dabocase, daikon, katran, dabacas ama wax kastoo kale oo ah tuber ama xidid.
Jacaylka ah in aad tijaabiso caafimaadkaaga suunka aad ugu jeceshahay, ka dibna isbinaajka ayaa kugu haboon. Dhirta aan qabin, oo leh beerashada iyo daryeelka saxda ah, waxay noqon doontaa qalab aan loo baahnayn oo abuuraya sheekooyin culus. Ka sokow isbinaajinta ayaa gacan ka geysan doonta xoojinta jirka oo leh noocyo kala duwan oo waxtar leh.kuwaas oo lagu kaydiyaa.